Shiinaha FK-CT20 Cilmiga cilmiga nafaqeeyaha carrada iyo soosaarayaasha | Chuanyunjie
1. Nidaamka hawlgalka: Nidaamka hawlgalka ee Android, kantaroolka ugu weyn waa inuu adeegsadaa processor-ka badan, processor-ka soo noqnoqda ≥ 1.8GHz, xusuusta awoodda ballaaran, xawaaraha hawlgalka degdegga ah, xasilloonida adag, wax ifafaale ah oo xannibmay. Iyada oo la adeegsanayo USB interface, xogta soo dejinta ayaa si dhakhso leh loo dhoofin karaa.
2. Qalabku wuxuu qaataa 7.0-inji shaashad weyn oo shaashad shaashadda Shiinaha ah, wuxuu keydin karaa oo daabacan karaa natiijooyinka baaritaanka, wuxuuna leeyahay howsha weydiinta taariikhda iyo daabacaadda.
3. Looma baahna in la sameeyo shaybaarro maran oo caadi ah si loo tijaabiyo. Marka loo barbardhigo aaladaha kale, talaabooyinka qalliinka, waqtiga hawlgalka iyo isticmaalka reagent ayaa kala bar la dhimay. Shaybaarka waxaa loo akhriyaa si toos ah si looga takhaluso khaladaadka ay keeneen shaybaarada caadiga ah ee caadiga ah iyo in la hubiyo saxnaanta natiijada baaritaanka.
4. 12 kanaalka midab wareegsan oo midabkeedu u egyahay (non solid module), kaas oo lagu ogaan karo 12 muunad isla waqtigaas. Muunad kasta waxay dooran kartaa walxaha ogaanshaha kala duwan, oo si toos ah ayey u wareegi kartaa. Waxay leedahay hawsha xusuusinta kanaal kasta si loo dhamaystiro ogaanshaha.
5. Qalabku wuxuu leeyahay shaqadiisa ilaalin u gaar ah, oo dejin kara magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah; Ku qalabaysan qufulka faraha si aad u gasho faraha, ka hor tag hawlgalka aan shaqaalaha ahayn si aad u eegto xogta tijaabada ah.
6. Waxaa lagu dhisay dalagga Atlas: sida ku cad sawirrada nafaqo-yaraanta dalag kasta, isbarbar dhig dusha caleenta, oo baadho tirada iyo yaraanta.
7. Daabacaadda xogta: ku-daabacaha kuleylka ee kuleyliyaha ah ayaa daabacan kara walxaha ogaanshaha, unugyada baaritaanka, shaqaalaha baaritaanka, waqtiga ogaanshaha, lambarka kanaalka, nuugista, waxyaabaha ku jira (mg / kg), lambar laba-cabbir ah iyo macluumaad kale.
8. Lagu dhisay astaamo horumarsan si loo gaadho meeleynta saxda ah ee kanaal kasta;
9. Qalabku wuxuu ku qalabeysan yahay afar nooc oo iftiinka nalka dhaadheer (casaan, buluug, cagaar iyo oranjo). Dhererka dhererka isha iftiinka waa deggan yahay, nolosha adeeguna waa ilaa 100000 saacadood, dib-u-soo-saarista ayaa wanaagsan, saxsanaantuna waa sarreysaa.
10. qalabku wuxuu ku qalabeysan yahay laambad muujinaysa danab, kaas oo soo bandhigaya qiimaha danab ee hadda jira waqtiga dhabta ah si loo hubiyo xaalada danab ee xasiloonida hawsha hawlgalka, wuxuuna leeyahay shaqada ilaalinta dab damiska. Haddii ay dhacdo cillad koronto oo lama filaan ah, xogta si toos ah ayaa loo keydin karaa si looga hortago luminta xogta
11. Soo saarida isla mar ahaantaana go'aaminta N, P, K iyo nafaqooyinka kale ee ciidda laga heli karo.
12. Xawaaraha ogaanshaha: heerka aqoonta caadiga ah, waxay qaadataa ilaa 20 daqiiqo in lagu ogaado ciidda ammonium nitrogen, fosfooraska iyo potassium (oo ay ku jiraan samaynta carrada uurka iyo u diyaarinta kiimikada), ilaa 50 daqiiqo si loo ogaado nitrogen bacriminta, fosfooraska iyo potassium, iyo ilaa 20 daqiiqo si loo ogaado curiye hal raad ah.
1. Awood koronto: AC 220 ± 22V DC 12V + 5V (batari weyn oo lithium ah oo kujira qalabka)
2. Awood: ≤ 5W
3. Range iyo xallinta: 0.001-9999
4. Khalad soo noqnoqoshada: ≤ 0.04% (0.0004, xalka dichromate potassium)
5. Xasiloonida qalabka: socodka oo kayar 0.3% (0.003, cabirka gudbinta) hal saac. Ka dib marka qalabka la bilaabo oo la kululeeyo 5 daqiiqo, nambarka muujinta kuma dhex wareegi doono 30 daqiiqo gudahood (cabbirka gudbinta iftiinka); Hal saac gudahood, qulqulka dhijitaalka ahi kama badnaan doono 0.3% (cabbirka gudbinta) iyo 0.001 (cabbirka nuugista); 5% (0. 005, cabirka gudbinta) laba saac gudahood.
6. Cilad toosan: ≤ 0.2% (0.002, baaritaanka baaruudda naxaas)
Hore: FK-CT10 Sunta cilmiga nafaqada carrada
Xiga: Mitirka chlorophyll
Falanqaynta Nafaqada Ciida
Nidaamka Falanqaynta Nafaqada
Ciidda Falanqeeyaha Nafaqada
Ciid Tijaabiyaha Nafaqada
Tijaabinta Nafaqada Carrada
Astaamaha qalabka Dareemida sare - 10-15-10-18 mol / L Xawaare sare - habka dhaqanka caadiga ah wuxuu ka badan yahay 18-24 saacadood, halka ATP ay qaadaneyso kaliya in ka badan toban ilbiriqsi Suuragalnimada - waxaa jira xiriir cad oo u dhexeeya tirada jeermisyada. iyo waxyaabaha ku jira ATP ee ku jira sheyga. Marka la ogaado waxyaabaha ku jira ATP, tirada noole ee fal-celinta ka soo baxa waxaa lagu heli karaa si aan toos ahayn Hawl-qabadka - tr ...
Astaamaha waxqabadka Qalabka cabbiraadda dahaadhka dhirta waa naqshad isku dhafan, oo ay ku jiraan LCD, furaha hawlgalka, kaarka SD ee keydinta iyo baaritaanka cabbiraadda, kaas oo ku habboon helitaanka xogta berrinka. Qalabku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka hawlgalka fudud, mugga yar iyo qaadista habboon. Qalabka keydinta ee loo isticmaalo aaladda waa kaarka SD oo si ballaaran loogu adeegsado suuqa. Waxay leedahay awood ballaaran oo wax lagu kaydiyo oo la isweydaarsado ...
Iftiinka cayayaanka 1. La jaan qaadaya ogaanshaha iyo xakamaynta cayayaanka atcsp 2. Tiknoolajiyada xakamaynta gariirka soo noqnoqda, oo la jaan qaada ogaanshaha cayayaanka atcsp iyo nidaamka xakamaynta 2. Aagga Saamaynta: ≥ 0.15 M2 3. Isha iftiinka dabaysha: oscillator soo noqnoqoshada (dherarka 320-680nm) hal nal 4. Darajada uumiga ah iyo biyuhuba waxay la mid tahay ama ka sarreeysaa IP66 5. Nolosha adeegga> 50000 saacadood, heerkulka shaqada - 30 ℃ ...
Qaabka kala duwanaanta moodeelka Kala duwanaanta shaqada YMJ-A No interface computer, xogta waa la keydin karaa oo laga daawan karaa martigaliyaha YMJ-B Waxaa jira is dhex galka kombiyuutarka, marka lagu daro keydinta xogta qofka martida loo yahay, waxay sidoo kale u gudbin kartaa xogta kumbuyuutarka, iyo softiweerka waa la daabacan karaa waxaana loo rogi karaa qaab heer sare ah YMJ-G Iyadoo la adeegsanayo isugeynta kumbuyuutarka iyo moduleka meelaynta GPS ee lagu daray, iswaafajinta waqtiga iyo xayeysiinta ...
Habka Cabbiraadda: Qiyaasta wareegga xiran Waxyaabaha cabbirka: Falanqaynta infrared CO2 falanqeyn heerkulka Caleenta shucaaca Sawir gacmeed firfircoon (PAR) Heer caleenta Heer caleenta Qoyaanka qoyaanka qolalka Caleemaha Falanqaynta iyo xisaabinta: Heerka sawir qaadista ee caleenta Heerka dheecaanka caleenta Intercellular CO2 fiirsashada Dhaqdhaqaaqa Stomatal Waxtarka dalabka farsamada tilmaamayaasha Falanqeyn: Falanqeeye laba-dherer-falanqeeye karbooni dioxide leh heerkulka a ...
Tilmaamaha shaqeynaya 1) Naqshadeynta isku dhafan ee martida iyo baaritaanka ayaa howlgalka ka dhigeysa mid sahlan. 2) Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada microcomputer, LCD bandhig muraayadaha dareeraha waaweyn. 3) Batariga waxqabadka sareeya, majiro koronto banaanka ah, bandhig danab hooseeya, oo kufiican cabirka berrinka. 4) Aagga weyn ee daab waa la cabi karaa hal mar (1000 * 155mm2) 5) Waxay keydin kartaa 250 nooc oo xog ah (aag caleenta, dhererka caleen, balaca caleen). ...